Ankizy boky momba ny yoga | Apg29
Yoga Mila sekoly sy akanin-jaza.
Inona anefa no mitranga izao? Eny ary, ny yoga dia mifandray amin'ny Hindoisma, mba ho maimaimpoana fanao, na amin'ny akanin-jaza sy ny sekoly!
Fampidirana Yoga ho an'ny ankizy ao amin'ny akanin-jaza soedoà sy ny sekoly. Fotoana izao ny miteny!
Izahay izao mahita fiovana lehibe eo amin'ny miditra mianatra sy ny sekoly. Sekoly tany Soeda efa taloha anisan'ny toetra kristianina, fihirana ary ny zavatra ivavahanareo maraina.
Dia tonga ny fotoana, dia afaka ny sekoly ny singa kristianina. Rehefa afaka izany, dia izao nanova ny sary aho, araka ny miditra mianatra sy ny sekoly ankehitriny nisokatra ho ny yoga.
Izany avy amin'ny fitarihana ny mpanao politika sy ny manam-pahefana am-pianarana nanantitrantitra fa zava-dehibe ho an'ny sekoly ho fivavahana tsy miandany. Tsy misy Kristianina na fivavahana hafa ny fiantraikan'ny hitranga.
Ny farany dia avy amin'ny governemanta hivoaka miaraka amin'ny fampanantenana fa sekoly, dia tsy ho afaka intsony. Soso-kevitra io dia mikendry ny am-pianarana intsony fa ankizy tratran'ny fitaoman ara-pivavahana.
Fa mamela izany ankehitriny ka milaza fa tsy momba ny fivavahana, araka mampiseho ny fivavahana tsy mahalala na mora ambakaina ianao. Ny tsy azo ekena ny fi NNS fanamarinana ny hanafahana ny maimaim-poana ny ankizy ny yoga.
Isika teo aloha tao amin'ny NY ertal zavatra aseho eo amin'ny fifandraisana amin'ny Hindoisma. Eto ny fi tsy NNS toerana mba hamelabelatra izany, fa tiany fotsiny raha mba Mariho fa ny zava-misy fa ny yoga manana toerana ao amin'ny Hindoisma afovoany, dia tsy afaka manazava izy. Ny teny hoe "ny yoga" tsara indrindra mety ho adika hoe "famonjena". Noho izany mazava ny foto-kevitra ara-pivavahana.
Azo voalaza fa miparitaka indrindra Hindu soratra masina rehetra ao amin'ny tontolo tandrefana dia ny Bhagavadgita. Ity boky ity dia mampiseho ny andriamanitra Krishna Hindu, ny ny yoga tompony. Afaka fifandraisana amin'ny Hindoisma hamirapiratra? Fanabeazana Na ny mpitantana dia tokony ho afaka hahita izany avy.
No tokony sekoly sy akanin-jaza ho toerana ho dokam-barotra ho an'ny ny yoga? Avy eo dia tokony koa ny endrika ara-pivavahana hafa sy ny fisehoana manana toerana mitovy fa manana ny yoga.
Ho an'ny sasany, izany dia endriky ny hery miasa mangina, izay miteraka ny liana amin'ny yoga, hatramin'ny mbola kely. Izany dia ho liana dia afaka mandroso mba hisoratra anarana ho an'ny antokony avy amin'ny mpampianatra, izay mahazo vola be avy aminy nifoha liana amin'ny ny yoga.
Izany dia hita ho toy ny tsy manan-tsiny ere ny yoga, ny kely indrindra, dia afaka mampitombo eo an-mahery vaika indrindra endriky ny yoga, kundaliniyogan. Ny NNS ny fi toe-javatra maro izay efa nijaly mafy ny olona rehefa manao izany amin'ny teny ny yoga. Raha mila fanazavana fanampiny Jereo ny: http://kundalini.se
Pirenena misahana ve ny tompon'andraikitra amin'ny mamela ny yoga ho an'ny ankizy, izay mety ho vavahady ny zavatra iray izay tena Mitondra ny aretin-tsaina?
Ny lahatsoratra dia avy amin'ny gazety afo isa roa taona 2018th